कृपया मार्केटिंगको साथ NSA जासूस तुलना गर्न रोक्नुहोस् Martech Zone
सोमवार, जुन 1, 2015 सोमवार, जुन 1, 2015 Douglas Karr
एउटा कुराकानी जुन मैले निरन्तरता दिदैछु NSA जासूस विवाद के कम्पनीहरु मार्केटिंग को लागी प्रयास को लागी अमेरिकनहरु मा यस प्रकारको डेटा स collecting्कलन गरिरहेछन्।
संयुक्त राज्य बाहिर बाहिर तपाईहरुका लागि संविधान यससँग स्पष्ट छ हाम्रो अधिकारको बिलमा चौथो संशोधन नागरिकको रूपमा।
अधिकारको विधेयकको चौथो संशोधन
अव्यवसायिक खोजी र जब्तीको बिरूद्ध आफ्नो व्यक्तित्व, घर, कागजात र प्रभावमा जनताको अधिकार सुरक्षित हुने अधिकारको हनन हुने छैन र कुनै वारेन्ट जारी गरिने छैन तर सम्भावित कारणमा शपथ वा पुष्टिद्वारा समर्थन गर्ने र विशेष गरी वर्णन गर्ने खोज्नु पर्ने ठाउँ, र व्यक्ति वा चीजहरू समाउनु पर्छ।
होस् वा छैन तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ कि मेटा डाटा को संग्रह को th औं संशोधन अन्तर्गत कभर हुनु पर्छ वा हुँदैन यो यहाँ तर्क गर्न गइरहेको छैन। मसँग मेरा आफ्नै विश्वासहरू छन् तर म संवैधानिक वकिल होइन (र उनीहरूले पनि स्वीकार गरेनन्)।
के म तर्क गर्न चाहन्छु मेटा डेटा संग्रहको लक्ष्य र पद्धति हो। एक कम्पनीको लागि, यो डाटा निजीकृत गर्न र प्रयोगकर्ताको अनुभव अनलाइन सुधार गर्न अधिग्रहण, अवधारणा वा ग्राहक मूल्य बढाउने लक्ष्यको साथ स is्कलन गरिएको छ। यो कसैको लागि सहज विषय हो - विशेष गरी कसरी डाटा संकलित हुन्छ र उपभोक्ताले उनीहरूको अनुमति प्रदान गरेको छ वा छैन। धेरै जसो समय तिनीहरू गर्छन्, तर यो कानूनी मम्बो-जम्बोमा गाडिएको छ सर्तहरू प्रयोगको शर्तहरूमा जब तपाईं सहमत हुनुहुन्छ जब तपाईं सेवाको लागि साइन अप गर्नुहुन्छ।
मलाई थाहा छ म एक बजार हो त्यसैले मेरो राय सिंक भयो, तर मलाई मन पर्छ कि कम्पनीहरूले मलाई ध्यान दिए। म तिनीहरुसंग जानकारी बाँड्न चाहान्छु र म तिनीहरु यो मेरो ग्राहकहरु को अनुभव मा सुधार को लागी प्रयोग गर्न चाहान्छु। यदि यसको अर्थ उत्पादन सिफारिशहरू वा लक्षित सन्देश प्रवाह हो भने, कृपया गर्नुहोस्! मलाई उत्पादन सिफारिशहरू मन पर्छ!
अब, बजारको लक्ष्य लाई बराबर गरौं सरकार जासूसको लक्ष्य। सरकारको मेटा डाटा को पीछा छ ढाँचाहरूको पहिचान गर्नुहोस् जसले उनीहरूको व्यवहारको आधारमा नागरिकहरूको गहिरो छानबिन गर्न अग्रसर गर्दछ। त्यो अनुसन्धानले शुल्क लिन सक्दछ र अन्तमा, कारावास। त्यसोभए जब बजारले डाटाको साथ बढी बेच्न खोज्छन्… सरकारले अमेरिकीहरूलाई सुरक्षा दिन मानिसहरूलाई खोज्न र कैद गर्न खोजिरहेको छ।
त्यो एकैको नजिक पनि छैन त्यसैले दुई तुलना गर्न रोक्नुहोस्।
मेरो मतलब फ्लिपिपन्ट भएको होइन, तर कृपया हाम्रो देशमा बन्दी रहेको इतिहासलाई हेर्नुहोस्। डाटाका अनुसार, El%% अपराधी मान्यताहरु कुनै प्रस्तुत औपचारिक प्रमाणहरू बिना याचिका मोलतोल को परिणाम हो, र सबै भन्दा कहिल्यै एक अपील संग चिन्ता।
त्यसो भए ल the्गसट यहाँ लिन्छौं। म धेरै यात्रा गर्दछु र म राजनीतिमा अनलाइन चर्चा गर्दछु। संयुक्त राज्यभर भौगोलिक रूपमा सरकार विरोधी सरकार वा आतंकवादी गतिविधिको बारेमा सरकारलाई प्रश्न गरेको मेरो कुराकानीलाई कत्तिको समय लाग्छ? यस हप्ता, म शिकागो जाँदैछु। हुनसक्छ शिकागोमा मेरो होटलको केही माईल भित्र स्लीपर सेल छ जुन सरकारले डाटा संकलन गरिरहेको छ। मसँग केस राख्नको लागि पर्याप्त परिस्थितिगत प्रमाणहरू लिन कति ओभरल्याप हुनेछ? मेरो आफुसँग बन्दुकको साथ यो मिलाउनुहोस् र त्यो कसरी देखिन्छ?
अब यो सबै कुरा मिलाउनुहोस् - मेरो सरकारी आलोचना, मेरो सैन्य सेवा, विश्वभरि ठूला शहरहरूमा मेरो यात्रा, मेरो बन्दुकको स्वामित्व - र असीमित बजेटको साथ संघीय अभियोजकहरूको पूर्ण शक्ति जोड्न। मसँग मेरो बचावको लागि उच्च-शक्ति प्राप्त वकीलहरू राख्ने संसाधनहरू छैन। के यो वास्तवमै लामो शट हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। फेरि, हाम्रो इतिहास पूर्ण रूपमा अत्याधिक अभिलाषाकर्ताहरूले भरिएको छ जो आफ्नो राजनैतिक गतिविधिको सुधारको लागि दृढ निश्चय पछि गएका छन्।
कृपया कम्पनीहरूको मार्केटिंगलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नागरिकहरूमा जासुसी गर्ने लक्ष्यहरूसँग तुलना नगर्नुहोस्। तिनीहरू पूर्ण रूपमा फरक छन्।
ध्यान NSA: केवल एउटा नोट यो हो कि म सरकार विरोधी होइन र आफ्नो बचाउको बाहिरी हतियार कहिल्यै लिने छैन। म स्थानीय सरकार र कानून प्रवर्तनको धेरै समर्थक छु। म प्राय: स federal्घीयताको विपक्षी हुँ, यद्यपि यसको असक्षमता, अवरोध र भ्रष्टाचारको कारण।
टैग: मार्केटिङnsa जासूस
जुन 3, 2015 मा 5: 45 PM
धन्यबाद, अन्ततः केहि तर्कहरु !!!!
यहाँ राम्रो विचारहरू डग। यो अधिक र अधिक हामीले NSA, बिग डाटा, र विशेष गरी भविष्यवाणी गर्ने विश्लेषकहरूको संसारमा हुँदै गरेको क्रस-ओवर कुराकानीहरू देख्न सुरू गर्यौं। तपाईंले भन्नुभए जस्तो, यो वास्तवमै एक सही लेन्सको रूपमा कथन हेर्ने गरीरहेको छैन। म तर्क गर्छु कि मार्केटर्सलाई "अवरोध नरहेको" वा "कम क्रिम्प हुनु" को राम्रो काम गर्न सहयोग पुर्‍याउने क्षमता भनेको ग्राहक केन्द्रितताको विचारको वरिपरि हो। त्यहाँ BAD ग्राहकहरु को रूप मा एक चीज छ। तिनीहरूले ऊर्जा र संसाधनहरू खानेछन्, तपाईंको रूपान्तरण दरहरू, आदिलाई चोट पुर्‍याउँछन्।
किन म त्यहाँ ठूलो जाल फ्याँक्न चाहान्छु जंकको झुण्ड समात्न, र प्रकृयामा मानिसहरूलाई कष्ट दिएर। यदि तपाईंले मलाई बताउनु भयो भने मसँग दुईवटा विकल्पहरू १०० लीडहरू वा १,००० लेडहरू प्रत्येक बाल्टिनलाई $ १००० को लागि थियो। यद्यपि मलाई थाहा थियो कि १०० सीसा लाग्ने धेरै बितेको बन्द / जित्ने अवसरहरू जस्तो देखिन्छ। म प्रतिशत खेल्न जाँदैछु र १०० लीडमा लगानी गर्छु। किन? किनभने यो अधिक महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले हाम्रो बिक्री समकक्षहरूलाई राम्रो पिचहरू स्विच गर्न दियौं। बेसबल समानलाई जारी राख्न, तपाईं आफ्नो बिक्री प्रतिनिधिहरू प्रत्येक कबाड पिचमा स्विइ want गर्न चाहनुहुन्न ... संभावना छ कि उनीहरूले धेरै हड्तालहरू गर्छन्। यो ड्राइभ गर्न सक्छन् पिच मा आफ्नो प्रतिनिधि को ब्याटि average औसत वृद्धि गर्न को लागी धेरै आकर्षक छ।
यो मानसिकता मैले बहस गर्ने मात्र होइन उच्च गुणस्तरको बिक्री कुराकानीहरू सिर्जना गर्दछ तर ग्राहकको अनुभव पनि बढाउँदछ। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ जहिले पनि बजारहरू बजारमा जान्छन् जुन स्प्रे र प्रार्थना गर्न जान्छ र हामीलाई आक्रमणकारी एनएसए-दिमागका एजेन्टहरूजस्तो देखिने बनाउँदछ। जब हामी DPM (डेटा प्लेटफर्म प्रबन्धन), भविष्यवाणी विश्लेषणात्मक, र अटोमेशन मा थप नवीनताहरूको दुनिया प्रवेश गर्छौं - आधुनिक मार्केटरहरूले यस टेक्नोलोजीको वास्तविक शक्ति र उद्देश्यहरूमा यस कथाभन्दा अगाडि राख्नु पर्छ। अन्यथा, हामी यस नुन स्नोडेन क्रानिकलको शिकार हुन जारी राख्छौं।